ဒီထရိတ်ဒင်းစတိုင်ကတော့ အချိန်တစ်ခုအထိသေချာစောင့်ပြီး trendအတိုင်းလိုက်ပြီး အခွင့်အရေးကို အမိအရ ယူတတ်တဲ့ ထရိတ်ဒါတွေအတွက် အလွန်မှကို သင့်တော်တဲ့ ထရိတ်ဒင်းစတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဒီလိုထရိတ်ဒါမျိုးတွေဟာ ဈေးကွက်ထဲကို မ၀င်သေးခင်မှာသူတို့ရောင်းဝယ်မယ့် ကာရန်စီအတွဲတွေရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေကို သေချာတွက်ချက်သုံးသပ်ကြပြီး ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေရမလဲဆိုတာကိုပါ သေချာစီမံချက်ချပြီးမှ ဈေးကွက်ထဲဝင်တတ်ကြတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်.
Trendအတိုင်း ထရိတ်တာက တကယ့်ကို ထိရောက်တဲ့ ထရိတ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီ trendလမ်းကြောင်း ပြန်မကန်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး သူကြာရင် ကြာနေသလောက်ကို အမြတ်ရယူနိုင်တာပါ. ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ပြသနာတစ်ခုရှိနေတာကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ trendလမ်းကြောင်း ပြောင်းမှာလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်နေရာမှာ ပြသနာရှိလာပါတယ်. သင်မြတ်ထားတဲ့အမြတ်တွေ ပြန်မပါသွားဖို့ဆိုရင် fundamentalsဒေတာတွေကိုပါ သေချာဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်နားစွင့်နေသင့်ပါတယ်. ဒါမှသာ အခြေအနေမကောင်းရင် အော်ဒါတွေကို ပိတ်နိုင်မှာပါ.
ဂျော့ဆိုးရော့ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အအေင်မြင်ဆုံးသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်ဘဏ်ကို ခြေထောက်ရိုက်ချိုးခဲ့တဲ့သူ ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့လဲ လူသိများပါတယ်. သူဟာဆိုရင် trendအတိုင်း ထရိတ်တဲ့ trendထရိတ်ဒါတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့ trendအတိုင်းလိုက်ပြီး ထရိတ်တဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ "trend ပြောင်းမယ့်အချိန်" တွေကို ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ထက်မြက်မှုတွေကြောင့်ပဲ ၃၀ဦးမြောက် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.